Kala duwan oo ku saabsan iPhone | Wararka IPhone
Isaga oo dhan iPhone, Taleefanka gacanta ee Apple. Halkan waxaad ka heli doontaa wararka, wararka, cusbooneysiinta barnaamijyada, adeegyada la xiriira iPhone-ka. Waxaan kuu soo sheegi doonaa wararka suurtogalka ah ee la xiriira moodooyinka cusub ee iPhone-ka, xulashooyinka cusub ee lagu soo daray barnaamijka softiweerka, isbeddelada shirkadda saameynaya adduunka iPhone-ka iyo guud ahaan wax kasta oo ku saabsan aaladdaan, Apple iyo adeegyada iOS iyo iPhone. .
Flex Twinkly, nalalka neon ee gaarka ah iyo HomeKit
by louis padilla samee horas 3 .
Waxaan tijaabinay nalalka cusub ee Flex smart ee Twinkly, oo leh muuqaal nalalka neon laakiin leh astaamo wanaagsan…
Taasi waa sida ugu fudud ee aad u xannibi karto waxyaabaha ku jira iPhone iyo iPad ee carruurtaada
by Miguel Hernández samee 2 maalmood .
Aaladaha mobilada, hadday yihiin iPhone, iPad ama nooc kasta oo kale, ayaa ku jira meel ay gaadhi karaan kuwa yaryar...
Nomad Base One Max: tayada ugu badan, awoodda ugu badan
by louis padilla samee 5 maalmood .
Waxaan tijaabinay saldhiga ugu dallacaadda premium ee aad ka heli karto hadda, muuqaalada, naqshadaynta iyo tayada...
Sida loo akhriyo oo looga jawaabo WhatsApp adigoon online ka muuqan
by Miguel Hernández samee 6 maalmood .
WhatsApp, waa codsiga fariimaha degdega ah ee ugu caansan adduunka, ama ugu yaraan kan isticmaala ugu badan, iyada oo aan su'aal la waydiin...
Aabe ayaa Apple ku andacoonaya $2.300 oo uu wiilkiisu bixiyay
by louis padilla samee Toddobaadyada 2 .
Aabe ayaa Apple ka sheegtay 2.500$ ka dib markii uu ogaaday in wiilkiisa...
AnkerWork B600 aad ayuu uga badan yahay kamarada webka fudud sababtoo ah waxaa ku jira, marka lagu daro kamarada 2K 30fps, laba…
Sida Pegasus u shaqeyso iyo sida loo ogaado haddii aad qaaday
by louis padilla samee Toddobaadyada 3 .
Pegasus waa ereyga hadal-hayntu. Qalabka jabsiga si aad u gasho dhammaan xogta iPhone kasta ama…
Roborock Q7 MAX+: Awood leh, degdeg badan oo is-maruqinaya
Waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah qalabka nadiifiyaha robot-ka ee ugu wanagsan suuqa oo leh howlo horumarsan sida navigation LiDAR iyo is-maruqinta,…
IOS 15.5 beta waxay xannibaysaa xusuusta sawirada laga qaaday goobaha "xasaasiga ah".
by Tony Cortes samee Toddobaadyada 3 .
Apple ayaa hadda samaysay isbeddel cusub oo laga helay macruufka 15.5 beta oo awood u leh…
Qalabka ugu fiican ee alaabtaada Apple
Waxaan ku tijaabinay qalabka MOFT ee iPhone iyo MacBook, qaar ayaa taageera taas, marka lagu daro inay na siyaan taageero aan u isticmaalno aaladahayada…
by louis padilla samee Toddobaadyada 4 .
Waxaan tijaabinay taleefoonnada hal-abuurka ee cusub, nooca Outlier Pro kaas oo wax ka yar € 90 na siinaya hawlo gaar ah…
Kiisaska IPhone 7 iyo 7 Plus waxay la jaan qaadayaan iPhone 8 iyo 8 Plus
Cayayaanka ugu caansan iPhone 7 iyo sida loo xaliyo
Sida loo dejiyo higaadaha sixirka ee iOS